Qalabaynta Suuqgeyn La Awoodi Karo Oo Loogu Tala Galay Ganacsi Cabir Kasta | Martech Zone
Sunday, May 22, 2011 Arbacada, Oktoobar 2, 2013 Douglas Karr
Gaadiidka Suuqgeynta waa magaca loo bixiyo barnaamijyada softiweer ee loogu talagalay waaxaha suuq geynta iyo ururada si loo fududeeyo howlaha iyadoo la otomatynayo howlaha soo noqnoqda. Hawlahaas mid ka mid ah ayaa ah awooda lagu aqoonsado booqdaha bartaada, qabsashada macluumaadkooda, iyo sameynta istiraatiijiyad isgaarsiineed oo joogto ah iyaga… lagu dhammaystiro wax yar ama aan lahayn agab iyadoo la adeegsanayo otomaatig.
Sida laga soo xigtay Kooxda Aberdeen, shirkadaha geeya nidaamyada otomatiga suuq geynta:
Hayso heerka beddelka hoggaanka 107% ka wanaagsan.
Hayso 40% qiyaasta celceliska ka weyn.
Hayso 20% koox ka sareysa kootada.
Ku kasbasho 17% saadaalinta saadaasha wanaagsan.
Ilaa hadda, hirgelinta otomaatigga suuqgeynta ayaa ah mid aad u dhib badan ama aad qaali ugu ah shirkadda celceliska inay fuliso. Tani way is beddeleysaa. Act-On waa nooc cusub oo softiweer ah otomaatiga suuq geynta loo dhisay si loogu hirgeliyo shirkadaha ugu yar, ama xitaa ugu weyn. Iyada oo qiimaha waa ~ $ 500 bishii (oo aan lahayn qandaraasyo muddo-dheer ah) also sidoo kale waa wax si macquul ah loo awoodi karo si loo hirgeliyo xalkan dhammaystiran.
Si loo guuleysto maanta, suuqleydu waxay u baahan yihiin inay dib u jaheeyaan qaabkooda aasaasiga ah iyagoo si fudud u abuuraya qiyaaso badan si ay si firfircoon ula midoobaan iibinta si ay u wadaan dakhliga, ”ayuu yiri Raghu Raghavan, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha guud ee Act-On Iskudarsanaanta fududaanta iyo awooda ee Act-On ayaa keenaysa iskuxirka ka maqan suuqa ee udhaxeeya xalka dhibatooyinka kaladuwan sida emailka iyo webka Analytics dhufto ee, iyo dhufto aad u adag oo sita dhufto ee iswada suuqgeynta.
Barnaamijka 'Act-On Software' wuxuu leeyahay tan ikhtiyaarro hodan ah… dhammaantoodna waxaa laga heli karaa hal madal:
Suuqgeynta iimaylka oo leh maareynta liiska iyo ololeyaasha suuqgeynta faleebo
Foomamka Websaydhada iyo bogagga degista
Isuduwaha waxyaabaha ku jira ee shirkadda
Kormeerka booqdaha websaydhka
Maareynta Webinar iyo maareynta dhacdooyinka (iyada oo loo marayo isdhexgalka WebEx)
Isku-darka CRM (oo leh is-dhexgal aan fiicnayn oo Salesforce ah)
Suuqgeynta warbaahinta bulshada iyo aaladaha lagu baadi goobayo
Feejignow qeexitaanka, qeybta, u qalmida, dhibcaha iyo falanqaynta
Act-On sidoo kale wuxuu ku siinayaa maamule heegan u ah oo aan kharash dheeraad ah ku bixin! Tani waxay caadi ahaan u tahay isweydaarsi iibiyayaal kale oo otomaatig ah oo suuq geynaya. Isku-dhafka Act-On ee adag Webex, jigsaw iyo Salesforce waxay ku siin kartaa dadaalladaada suuq-geyn waddo dhammaystiran - laga bilaabo rajada, bogga soo degitaanka, demo, kobcinta, jiilka hoggaaminta, xiridda… adigoon waligaa ka bixin software-ka. Taasi waa nidaam adag.
Tags: Hubinta Noocacalaamadeynta bulshada
Khadadka Mawduuca emaylka Erayada kiciya miirayaasha Spam
Nabadoon Douglas, sidee isugu barbar dhigaysaa Act-On iyo HubSpot? Ma xal SAAS ah mise waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto server-kaaga Webka? Hadday tahay SAAS, wax fikir ah oo ku saabsan adeegga macaamiisha?
Salaan wacan, John McTigue
Tani way xoogaa ka xoog yar tahay Hubspot. Uma maleynayo Hubspot inuu yahay madal otomaatig suuq geyn sida ugu badan ee dalabka suuq geynta. Waan maqnaan karaa - laakiin uma maleynayo CRM, ololeyaal faleebo, iwm inay ka mid yihiin arjiga Hubspot.
HubSpot waxay leedahay kobcin macdanta (drip) waxayna hogaamisaa isdhexgalka API ee Salesforce iyo kuwa kale ee CRM, bogga soo degida iyo hagaajinta, qalabka SEO (inkasta oo xoogaa heer hoose ah), CMS loogu talagalay websaydhka iyo mashiinka isku dhafan. Taasi waxay umuuqataa mid aad uqurux badan oo ku saleysan otomaatig suuq ku saleysan. Xitaa waxay leeyihiin suuq-geyn emayl oo la dhisay.
Labada aqoonba waan aqaan; runti waxay u soo degaysaa waxa aad isku dayeyso inaad sameyso - waa diiradda ugu horreyn ee soo galitaanka, markaa hubspot ayaa laga yaabaa inay mudan tahay in la fiiriyo, ama ugu yaraan qalabkooda 'bilaash' ah ee 'seo tool'; haddii diirada la saaro sidii loo heli lahaa guul ka fiican labada olole ee banaanka iyo / iyo soo galida iyo in la fududeeyo in si wada jir ah loo maareeyo ololahaaga iyo aaladahaaga - sida webex, salesforce.com, jigsaw iyo in ka badan, ka dibna Act-on laga yaabee inuu ku habboon yahay. Gaar ahaan waxaa la siiyaa sida ugu fudud ee Act-On ay u tahay bilaabid / adeegsi iyo diiradooda dusha sare ee emaylka.
Jiilka barnaamijka ama nidaamka ganacsiga, Sideen ku ogaadaa inaan helayo qiimaha ugu fiican ee barnaamijka / nidaamka.
Suuqgeynta iPhone App
Jun 1, 2011 saacadu markay ahayd 3:57 AM
Kani waa mid kamid ah baloogyada waaweyn ee aan aqriyay maanta. Boggaaga waxaa ku jira macluumaad badan oo wanaagsan waana hubaa in dad badani jeclaan doonaan sida aan jeclahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo boggan suulka kor u qaadista. Sii wad shaqooyinka wanaagsan ragga. Waxaan u maleynayaa inaan si joogto ah ugu soo laaban doono degelkan. Mahadsanid.